BEERO AY LEEYIHIIN SHIRKADO SHISHEEYE AH OO LAGU GUBAY ITOOBIYA | SOMALISTATE.COM
BEERO AY LEEYIHIIN SHIRKADO SHISHEEYE AH OO LAGU GUBAY ITOOBIYA
1 Comment ADDIS ABABA – Kacdoon-wadyaasha gobolka Axmaarada ee Itoobiya ayaa dab qabadsiiyey beero badan oo ay leyihiin kambaniyo ajanabi ah, gaar ahaan shirakado laga leeyahay wadamada Holland iyo Israel.
Warar hordhac ayaa tilmaamaya in boqlaal qof oo cadhaysani ay ku gadoodeen beer ku taal koonfurta Bahir Dar oo ay leedahay shirkad fadhigeedu yahay Holland, Esmarlada farm Inc, halkaas oo ay dab ku qabad siiyeen.
Maareeyaha shirkada ee Itoobiya, Haile Seifu, ayaa sheegay in kacdoon-wadayshu khasaare xoog leh u geeysteen beerta iyada oo askartii ilaalada ahayd laga xoog batay. Haile ayaa tibaaxay in khasaaraha beerta soo gaadhay lagu qiyaasayo ilaa $7.8 milyan.
Warbaahinta taageerta kacdoonka iyo mucaaradka dalka ayaa hadda ka hor xustay in la gubay asandooyin laga beero ubax oo ku yaal ismaamulka Axmaarada. Xogaha ay soo bandhigeen mucaaradku ayaa lagu sheegay in beeraha si sharci-darro ah looga qaatay dadkii horey u lahaan jiray.
Mareegta wararka ee uu maamulo TV-ga caanka ah ee Bloomberg ayaa tibisay in ugu yaraan 9 beerood oo ay leeyihiin shirkado shisheeye ahi weerar lala beegsaday iyada oo halkaas ayka dhasheen khasaare xoog leh. Kambaniyada beerahooda la weeararay ayaa laga leeyahay wadamada: Israel, Talyaaniga, Hindiya iyo Beljam. Dibadbaxayaasha ayaa ku qamaamay beeraha iyaga oo gubay dalagyadii iyo hantidii beeraha dhax-taalay.
Docda kale, banaanbaxyada iyo kacdoonka ka socda gobolka Axmaarada ayaa galay waji ay xaalado faraha ka baxday iyada oo la sheegay in ay xukuumadu ciidan gaadhaya ilaa 2000 u daadgureysay goobaha qulqulatooyinku ka jiraan.
Warbaahinta mucaaradka ayaa tibaaxday in goobo badan oo gobolka ka mid ah ay ka jiraan dagaalo u dhaxeeya shacabka iyo ciidmada dawlada. Dadweynaha ayaa gubay hantida ay dawladu leedahay, halka ciidamadu ay rasaas ku fureen dadka iyada oo la sheegayo dhimasho iyo dhaawacba. Waxaa adag in si madax-bnaan loo xaqiijiyo waraka mucaardaka.
Qulqulatooyinka ismaamulka Axmaarada ayaa u muuqda in ay yihiin kuwii ugu xumaa ee dalka ka dhaca tan iyo intii xukuumada EPRDF talada dalka la wareegtay. Xukuumada ayaa la daala-dhacysa sidii qulqulatooyinka loo xakamayn lahaa iyada oo dhanka kale ka cabsanaysa in ismaamulada kale ay bilaabaan kacdoon noocan ah.
Guud ahaan dadka ku dhaqan gobolka xabashida ayaa ka qayb-qaadanaya kacdoonka iyaga oo dhgaha ka furaysaty amarda xukuumada islamarkaana dagaal kala hor tagay ciidmada dawlada.
One Response to BEERO AY LEEYIHIIN SHIRKADO SHISHEEYE AH OO LAGU GUBAY ITOOBIYA
Hadaf says:	1st September 2016 at 2:27 pm	Asc wab saydkan warar kiisa waan jeclahay fadlan wararka inaad moo kordhisid ayaan jeclaan lahaa waxaan ahay costam kaaga toos ka aha